Uyisebenzisa kanjani ihammer yokuDiliza?
Izando zokudiliza zisetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso wokwakha kwaye zezona zixhobo zinzima kodwa kulula kakhulu ukuziphatha. Esi sixhobo sinamandla siluncedo ekwehliseni izakhiwo ezinkulu zekhonkrithi. Ukudakumba ihamile zisebenzisa kancinci ukuba ziikhilogram kakhulu kumphezulu wekhonkrithi ide yehle. Improp ...
Kutheni ufuna itsheyini yerhasi?
Xa kufikwa ekusetyenzisweni komthi onzima, akukho nto yenza ukuba umsebenzi wenziwe ngcono kunesixhobo esisebenzisa igesi. La marhamncwa agqumayo athandwa ziinkampani zokwakha, abagcini bemithi, abagawuli bemithi, kunye nabanini bamakhaya abafuna ukukhathalela ishishini elithile. Kule nqaku, iqela lethu lezixhobo zeNerds ...
Izixhobo zamandla ezibalulekileyo ozifunayo ekugcineni ikhaya kunye neeprojekthi ze-DIY
Xa ndikwimisebenzi yokwakha ndenza umsebenzi ophindaphindwayo, ndiyathanda ukudlala imidlalo yengqondo ukuze ndisebenzise ixesha lam. Nalu uluhlu lwam kwaye kutheni ndibakhethile. Njengoko sisiya kwiiholide, ngamana ingakukhuthaza ukuba uncedise ekuqokeleleni isixhobo somnye umntu, okanye ukongeza ngokwakho ngoncedo lokuthengisa ngamaxesha athile onyaka. Hayi. ...
Izizathu ezi-7 zokuba kutheni ufuna iJigsaw
Emva kokuqhuba, i-jigsaw ihlala sisixhobo samandla sesibini esiza kusifumana nge-DIYer. Ezi zixhobo zixhaphake kakhulu kwaye zinokuphathwa ngabenzi bayo yonke iminyaka. Iijigsaws zigqwesa ekusikeni ijika kumagumbi nangeentsimbi — kodwa zininzi kakhulu ezikwimbali yazo. Ukuba awunayo i-jigsaw ye ...
Njani: Sebenzisa iLeaf Blower
Isilingo kukuvumela nje ukuba sikrazule, kodwa ubuchule kunye nesicwangciso siyabandakanyeka ekuphatheni esi sixhobo samandla. Fumana indlela yokusebenzisa i-blower blower ngokufanelekileyo kwaye unciphise ixesha olichitha ubuyela umva. Ukuwa kugcwele ibhola ekhatywayo, ishushu iapile cider, kunye neepie zethanga. Kwaye amagqabi. Kweminye ...
Uyisebenzisa kanjani i-Angle Grinder
Ii-Angle grinders zizixhobo ezinokuchaneka ezinokusila isinyithi kunye nokusika iithayile, i-stucco kunye neepavita, ukukhupha udaka, kunye nokuba bayakwazi ukwenza isanti, ipolishi kunye nokulola. Isishwankathelo se-grinders ze-engile Uya kufumana i-angle grinders naphi na apho izixhobo zamandla zithengiswa khona. Ukusila okukhulu kwezandla kuyafumaneka, kodwa i-4-i eyaziwayo ...
Ukuphindaphinda ukusebenzisa iiSaws kunye neeNgcebiso
Ukubuyisela iisarha kwenza ukudiliza kube lula kwaye kumnandi ngakumbi. Ungazabalaza kwaye uyiqhekeze ngeendlela ezahlukeneyo ze-crowbars kunye ne-hacksaws okanye ungasebenzisa isarha yokubuyisela kwaye usike nje simahla. Sesona sixhobo sokudiliza. Iifestile, iindonga, imibhobho yamanzi, iingcango nokunye — zisika nje uze uziphose. Apha'...
Ukuba livolontiya namhlanje!
Umphathi ka Kangton Mnu Su ulivolontiya ukukhokela abemi ukuba badubule i-Vaccine ye-COVID-19.
Ungazikhetha njani izixhobo zombane
Amanyathelo okhuseleko okuthenga izixhobo zombane: Okokuqala, izixhobo zombane zibanjwa ngesandla okanye izixhobo ezinokususwa eziqhutywa yimoto okanye ngombane kunye nentloko yokusebenza ngokusebenzisa indlela yokuhambisa. Izixhobo zombane zineempawu ekulula ukuziphatha, ukusebenza ngokulula ...
Iindidi zezixhobo zombane
Umbhobho wombane Iinkcukacha eziphambili zi-4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 25, 32, 38, 49mm, njl njl. ye-390n / mm. Kuba iintsimbi nonferrous, iiplastiki kunye nezinye izinto, le ma ...
Ungawasusa njani amavili kwisithuthi sakho
Amavili akho yinxalenye ebalulekileyo yesithuthi sakho. Bakhona ukhuseleko, intuthuzelo kunye nokusebenza. Amavili afakwa kumavili, wona ke afakwa kwisithuthi. Ezinye izithuthi zinamavili acacisayo okanye anemiqathango kuwo. Isikhokelo sithetha ukuba ti ...